SAGE SAGE: GURYAHA FAA'IIDO LEH IYO ISTICMAALKA GEEDKA - DAAWADA DADWEYNAHA
Sage - Geedo, kuwaas oo caan ku ah guryaha ay dawooyinka tan iyo wakhtiyadii hore. Hippokrat waxay tilmaameen sifooyinka wanaagsan ee qoraallada. Lama huraan sageerinta iyo daawada casriga ah. Waxyaabaha ka soo baxa geedo-geedeed ee daaweynta geedi-socodka bararka maqaarka iyo habka neef-mareenka. Maaddada kondhomolojiga, waxaa si weyn loo isticmaalaa sida wakiilka anti-bararka iyo firfircoonida. Daawooyinka dadku waxay heleen isticmaalka ugu weyn.
Maqaalkani waxaan eegeynaa waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ku saabsan dhirta caleenta dhirta, waxaanu kuu sheegi doonaa waxa uu isticmaalo iyo haddii ay jiraan waxyeelo.
Sage: Halabuurka ku habboon ee warshad caafimaad leh
Halabuurka ka mid ah caleemaha cagaarka clary waxaa ku jira xeryo badan oo wax ku ool ah iyo walaxyo: tannic iyo dabacsanaan, flavonoids, acids organic, fitamiinada P iyo PP, qashinka, phytoncides. Waxa kale oo ku jira saliid asaasi ah oo taajir ah oo laga helayo pinen, cineol, thujone, dharbaaxo, foosto, iyo xeryaha kale ee terpene. Saliidda wax lagu kariyo ee saliidda lagu shubo waxaa lagu soo saaraa diirada ugu sareysa inta lagu jiro xilliga dhirta, iyo faylka la soo saaro badhtamaha xilliga dayrta.
Sidee sheekooyinka cursada leh: sifooyinka daawooyinka ee daawooyinka dhirta
Wakhti dheer, awoowayaasheennu waxay u adeegsadeen cams si ay u noqdaan wakiilka anti-bararka indhaha iyo cudurada habka haweenka. Tani waa geedo dabiiciyan ah. Cabbirada cagaarka ee la kariyey, oo ka caawiyay wadaaddada in ay nirvana ku raaxaystaan ​​xafladaha cibaadada.
Astaanka botanist Nicholas Culpeper ayaa aaminsan in cage sage uusan aheyn oo keliya dhawaaqyada bogsiinaya, laakiin sidoo kale wuxuu soo saaraa daaqad fudud oo leh saameyn deg deg ah oo deggan. Faleebo ayaa laga sameeyey abuurka, kaas oo lagu daboolay indho-bararka.
Sida muuqata, saameyntu waxay ahayd maaddooyinka muusikada, taas oo soo saartay geedi socodka nabarrada iyo yaraynta xanaaqa. Hieronymus Bock, 1577-kii ayaa lagu daaweynayaa geedo, waxay ku talinaysaa in lagu yareeyo xakamaynta sidii loo kordhin lahaa suurtagalnimada in dumarka uur yeelato. Daraasadaha casriga ah waxay muujiyeen in dheelitirku uu la mid yahay hormoonada dumarka ee jimicsiga dhismaha, sidaas darteedna wuxuu leeyahay saameyn aphrodisiac ah.
Clary sage saliid muhiim ah wuxuu leeyahay sifooyin liddi ku ah boogaha iyo waxyeello xoog leh oo bogsoon leh. By wax ku oolnimada waxaa la barbar dhigi karaa leh Vishnevsky cadar ah. Shidaalku wuxuu kiniinka ku kiciyaa gubasho, boogo boogo dheer oo aan dheereyn karin, iyo sidoo kale dhaawacyo afka ah sida gingivitis iyo stomatitis. Saliidda lagama maarmaanka ah ee saliidda Clara ee laga soo saaro kobcinta ugu horreysa ayaa ka faa'iideysatay isticmaalka daaweynta cudurrada daba dheeraatay ee miyir-beelka iyo nidaamka dareenka maskaxda. Duufaannada la qalajiyey ee dhirta ayaa lagu daraa qiimaha daawada. In homeopathy, waxay dhajiyeen faleebo ka dhan ah madax xanuun, a sedative ah dhibaatooyinka "haweenka" iyo diyaarinta qurxinta.
Xaaladaha bogsashada ee cage-ga waxay sidoo kale u fidiyaan habka isdaba-marinta jidhka bani-aadmiga, oo ku-ool ah saamaynta venotonic. Khidmadaha, oo ay ku jiraan buundo, caawimaad la xiriirta dhiig karka, xajmiga xididka iyo cudurrada ku dhaca wareegga wareegga. Cudurada maqaarka, saliid muhiim ah ee soodhada clary waxaa loo isticmaalaa hababka massage iyo daaweynta gacanta. Saliidayn finanka, naadi jimicsiga dufanka maqaarka wajiga, daawee timaha luminta iyo baabi'inta qandhada.
Ma taqaanaa? Waxay yiraahdaan in sage-ga tiro badan ayaa sababi kara xaalad euphoric ah, laakiin qof kastaa ma saameeyo saameynaha noocaas ah ee nidaamka dareenka.
Sidee loo adeegsadaa daawada casriga ah?
Caleemaha iyo cawska isboortiga ayaa loo adeegsadaa warshadaha casriga ah ee dhirta, waxay ku taajiraan saliida saliidda ah, flavonoids, fawaakihada iyo fitamiinada kooxda P. Fasaxyada walxaha anti-bararka, antimicrobial iyo hemostatic-ka sameyska ayaa ka kooban.
Wax kasta oo kale waxay kudeeheysaa qarsoodiida casiirka gastriciga ah waxayna caadiyan gogol dhigeysaa. Daaweynta, inta badan geedo ayaa la qaadaa, laga bilaabo fusada iyo decoctions la diyaariyey, laakiin cage sage guud ahaan waa kaydka waxyaabaha muhiimka ah. Si aad u diyaariso faleebo, waxaad u baahan tahay inaad qaado laba qaado oo caleemo la jajabiyey ee geedka, ku shub 500 g oo ah biyo karkaraya.
Ka dib markaad ku shubto darmuuska oo ku adkeyso hal saac. Si aad u sameysatid decoction, waxaad u baahan tahay inaad qaadato isla qaybta caleemo taxadar ah, ku shub biyo karkaraya kuna kari ilaa 15 daqiiqadood dab aad u hooseeya.
Qodobbada waxtarka leh ee sajinta ee daawada dhaqameed
In homeopathy, sage waxaa loo isticmaalaa cudurrada dhuunta iyo nidaamka neefsiga: cawska, cuncunka, laryngitis, tuberculosis iyo edema sambabada. Cudurada lafaha iyo kala-goysyada: polyarthritis, radiculitis iyo atherosclerosis. Sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee gynecology. Cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirka: boogaha marxaladaha kala duwan, kolitis, gumaacad, cudurrada beerka iyo daaweynta nabarrada dibadda iyo gudaha gudaha.
Waxaa muddo dheer tijaabiyey by waayo-aragnimo caleemo antipotovoe cage sage. Saameyntu waxay ku timaadaa si dhakhso ah ka dib markaad qaadato shaah baxa, laakiin dhaqdhaqaaqa ugu sareeya wuxuu dhacaa laba saacadood kadib. Mararka qaarkood natiijadu waxay socon kartaa maalinta oo dhan. Waxay ka caawineysaa in badan oo qaaxo ah oo qaba cudurka qaaxada oo leh dhidid habeennimo ah.
Qaadashada shaandhada shaaha waxay caawineysaa in ay si dhakhso ah u daaweyso boronkiitada daba-dheeraaday iyo bararka kelyaha. In foomka saafi ah, waxaa suurtagal ah in la calaliyo caleemo dhir ah cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirrada, biliary iyo beerka, iyo sidoo kale ka duri, choleretic iyo astringent.
Waxay caawimaysaa bukaanka qaba neefta neefta si ay u cabbaan caleemo dhowr ah oo ay weheliyaan caleemaha ciridka. Halkaas waxaa ka mid ah, cage-ka caajis ah oo jilicsan oo dhadhan fiican leh.
Waa muhiim! Teasyada ka soo baxa dhirta waxay gacan ka geystaan ​​joojinta xilliga nuujinta ee hooyooyinka kalkaaliyaha. Qodobka caajiska ah ee loo yaqaan 'cage sage' waxaa loo qaadaa si gaar ah jihada dhakhtarka tagaya.
Maraqyada iyo infusions ee dhirta this si fiican u xoojisaa timaha timaha, hoos u dhicinta geedi socodka. Waxaa jira xaalado marka cilladkan joojiyaan. Sidaa darteed, sage cage wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh codsiga ragga qaba dhibaatooyinka timaha, faa'iidooyinka ay tahay mid cajiib ah. Noocyada mucjisooyinka noocan oo kale ah kama gudbi karaan cadarka. Waxyaabaha lagu soo saaro waxaa ku jira shaambo kala duwan.
Fara-gelinta xayawaan-xawaareedka ayaa daaweynaya dhallaanka, cirridka iyo dhuunta dhiigga, xannuunka ilkaha. Si aad u diyaarisid maraqan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 5 garaam oo midab leh, jilicsan oo la midab ah oo ku shub hal galaas oo biyo karkaraya. Maraq wuxuu ku adkeysanayaa in uu qaboobo oo cadaadiyo. Waa in lagu dabaqo qaab diirran.
Haddii ay dhacdo geedi socodka nabarrada ee xubnaha neefsashada, neefsashada laga yaabo inay caawimaad ka hesho clary. Mishiinka xawaashka waa in lagu daadiyaa biyo oo la kariyey dhaliyaha 4 daqiiqo. Ka dib dabka, iska jooji oo neefta ka sii daa, ku dabool shukumaan.
Ma taqaanaa? Xitaa xilliyada "dhimashada qatarta ah" ee qarniyadii dhexe, qoob-ka-dhaqaaqtu waxay ahayd meesha ugu horreysa ee daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic therapy' oo ah daawo lagama maarmaan ah immunomodulator iyo tonic.
Isticmaalka isticmaalka clary sage ee cosmetology
Saliidda muhiimka ah ee lagu magacaabo clary sages ayaa laga helay codsigeeda cosmetology. Waxaa loo isticmaalaa aromatherapy macnaheedu yahay in lagu nasto, niyadjabiyo oo cadaadiyo madax xanuun. Saliidda Sage waxay caddaynaysaa maskaxda, isdhexgalaan waxayna siisaa dareemo qanacsan. Sheekada Clary waxay keenaysaa jawaab celin wanaagsan oo laga helo maaddada kookooleeynta ee ku saabsan alaabooyinka faa'iido leh ee timaha. Decoction ah ee warshad bixisaa iftiinka dabiiciga ah, ka saaro xamaasad, kicinaysaa korniinka iyo caadiyan dheef-shiid kiimikaad-dux ah ee madaxa.
Noocyada bakteeriyada ee dhirta ee dhirta ayaa ka caawiya sidii looga takhalusi lahaa finanku inta lagu jiro da'da. Soo saaridda caleemaha clary waxaa lagu daraa kiriimyada dhallinyarada ah oo u nugul maqaarka. Duufiska qashinka caleemaha ayaa lagu dhajiyaa meesha isha, taas oo ka caawisa in laga saaro goobo mugdi ah oo muuqaalkuna cad yahay oo faraxsan.
Sida loo isticmaalo soodhada yar ee aromaterapy
Clary sage ayaa helay faa'iido cajiib ah oo ku taal beerta aromatherapy. Sage saliid muhiim ah oo lagu daboolo curcur, barkin ama ku shubtay laydhadhka dabiiciga ah wuxuu leeyahay saamayn nasasho leh oo leh saameyn antispasmodic ah. Urka quruxda badan ee nuucista ah wuxuu hagaajiyaa dareenka xilliyada jimicsiga xilliga caadiga ah ee dystonia, daal daba dheeraatay, dareen diidmo iyo weeraro argagax. Carafka Clara Sage saliida muhiimka ah wuxuu yareeyaa mareenada inta lagu jiro khalkhalka hormoonka.
Saliidda muhiimka ah ee warshadkan waxaa lagu daraa qaybo kale marka la abuurayo cadar iyo biyo musqusha. Waxaa intaa dheer, waxay u dhaqmaysaa sida nooca isku xirka u dhaxeeya si kale oo si fudud loo burburiyo saliidaha muhiimka ah. Thanks to this, isdifaac joogta ah ayaa la abuuray.
Waa muhiim! [i] Xajmiga firfircoon ee feytohormoonku wuxuu saameyn ku yeeshay xarumaha quruxda badan ee "raaxada" haweenka, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in aan lagu xadgudbo khasaare noocan oo kale ah.
Sage saliid lagama maarmaan ah waa la isku daraa saliidaha shimbiraha, bergamot, miro, sandalwood, jasmine, juniper, foox, iyo gaar ahaan kor u kacay.
Isticmaalka sage ee warshadaha cuntada
Cunnooyinka kuyaal dalalka koonfurta ee Yurub iyo Ameerika, sage ayaa helay faa'iido aan caadi ahayn. Caleemaha dhalinyarada ee dhirta waxaa lagu dhajiyay dhadhan qadhaadh ah oo qadhaadh leh caraf udgoon. Sage wuxuu siinayaa taabashada qaababka digaaga, hilibka, kalluunka iyo khudaarta. Waxaa lagu daraa meel kasta: macaamiisha, saladhyada, koorasyada koowaad iyo labaad, macmacaanka iyo xataa cabitaannada. Waxaa cajiib ah xaqiiqda ah in, in la qalajiyey state, caleemaha qoyaanku ma aha kuwo ka liita dhadhanka cusub.
Dareemka shiidan ee qaabka budada basbaaska ah waxay noqon kartaa saxan xilli la diyaariyey, iyo kahor inta u adeega. Waxaa loo isticmaalaa in la siiyo farmaajo nadiifin iyo dhadhan. Ha sameynin adoon isticmaalin ee warshadaha macmacaanka iyo khamriga. Xitaa marka la abuuro sigaarka iyo sigaarka, sage waxaa loo isticmaalaa in lagu dheelo noocyo sigaar cabbid ah.
Ma taqaanaa? Isticmaalka joogtada ah ee saliida shaandhada ayaa si fiican u hagaajiya xasuusta.
Caaqil Clary: khilaafka
Waxaan u tixgelinnay qaar badan oo ka mid ah guryaha wanaagsan iyo codsiga warshadkan cajiibka ah ee warshadaha kala duwan, laakiin waa maxay caqabadaha ku salaysan? Warshadan laguma qaadi karo qaab kasta inta lagu jiro uurka ama naasnuujinta, haddii aadan si ula kac ah u baahnayn inaad joojiso nuujinta.
Dadka qaba dhibaatooyinka caanka ah ee qanjidhka thyroid, oo aan la qabsan karin wax soo saarka hoormoonka, waa in ay sidoo kale iska ilaaliyaan cunista cunto. Wixii cudurada habka taranka ee haweenka, warshadani waa la mamnuucay.
Clary Sage - Tani waa warshad aad u xajiin leh, sidaa daraadeed dhakhtarrada maqaarka ayaa si gaar ah u tilmaamaya khilaafka dadka ee leh dulqaad la'aan qof ahaaneed.